Burcad badeed Somali oo afduubay saddex markab oo laga leeyahay Thailand. – Radio Daljir
London, Apr 20 – War uu Midawga Yurub ka soo saaray magaalada London ayaa lagu sheegay in saddex markab oo ay leedahay dawladda Thailand ay gacanta u galeen burcad badeed Somali ah, kuwaasi oo hadda ku soo jeeda Xeebaha Somaliya.
Burcadda ayaa maraakiibtaan ka soo khafaashay meel 2,000 KM u jirta xeebaha Somaliya, taasi oo ah markii ugu horreysay oo burcad badeedda Somalidu ay masaafo intaasi le?eg ka fuliyaan afduub noocaah ah.
Maraakiibtaan ayaa waxaa saaran in ka badan 70 shaqaale ah oo u dhashay dalal kale duwan, waxaa ay tirada dadka afduubka loogu heysto xeebaha Somaliya ka dhigeysaa ku dhawaad 3 boqol oo qof.
Arrintaan ayaa layaab ku noqotay hawlgalka Atlanta ee lagula dagaalamayo burcad badeedda Somalida, kaasi oo ay fulinayaan ciidamo dalal badan ka socda oo jooga xeebaha ku teedsan Somaliya iyo kuwa ka baxsanba, laakiin waxaa hubaal ah in arrintani ay mar kale beesha caalamka ku soo jeedineyso xeebaha, waxaana suuragal in la xoojiyo hawlgalka lagula dagaalamayo burcad badeedda Somalida.